Factory Power Valves Factory, mpamatsy - Mpanamboatra valizy Power Station China
Karazana famaritana: valizy vaky herinaratra nokleary Model: ZKPHF41F-150 150Lb, ZKPHF21F-300 300Lb Diameter nomera: DN 20-50 Ny vokatra dia ampiasaina ho an'ny singa AP1000 ho toy ny fitrohana tsindry tsindry ratsy amin'ny fitaovana mba hisorohana ny tsindry ambany be loatra hanimba ny fitaovana. 1.Amin'ny famoahana volo karazana amin'ny lohataona, ny valizy mamaky vovoka dia misy tsindry mora foana sy fanamboarana ary fametrahana mora. Ny valizy dia natao ho an'ny haavon'ny tsindry sy ny tsindry famolavolana ...
M60A valizy vaky vaky
Karazana famaritana: valizy fanapahana herinaratra nokleary modely: JNDX100-150P 150Lb Diameter nomera: DN 100-250 Nampiasaina tamin'ny rafitra condenser an'ny toby famokarana angovo nokleary, misy fitrohana tsindry ratsy, fanalefahana tsindry fika ary fisorohana rano mitete. vaky vaky, valizy mandeha ho azy, tsy mila fiara fanampiny rehefa ampidirina. Amin'ny fanjakana miasa mahazatra, ny hery iraisan'ny lohataona sy salantsalany ampiasaina amin'ny kapila valizy dia manindry ny valizy d ...
Temperature sy tsindry mampihena ny valizy amin'ny bypass tsindry ambany
Detail Type Pressure Reducing Valve Model Y966Y-P5545V, Y966Y-P54.550V, Y966Y-P54.535V, Y966Y-P54.530V Nomera Diameter DN 200-450 Miaraka amin'ny toetran'ny mari-pana ambony sy ny fahasamihafana lehibe amin'ny tsindry ary ny mari-pana, dia mandray maro -fandraisana tanana ho an'ny fihenan'ny tsindry sy ny famerenan'ny backpressure ny lohataona lohataona ho an'ny famafazana rano sy ny fihenan'ny mari-pana mba hiantohana ny fihenan'ny mari-pana sy ny tsindry. Advantages Valve dia rafitra angular a ...
Temperature sy tsindry mampihena tsindry ho an'ny fanoherana ny tsindry mafy
Detail Type Pressure Reducing Valve Model Y966Y-P54.5140V, Y966Y-P55190V Nominal Diameter DN 125-275 Izy io dia manana ny toetran'ny mari-pana avo sy ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry ary ny hafanana. Izy io dia mandray tan-tànana marobe ho an'ny fampihenana ny tsindry ary ny rano fanamafisana ny atona entona manampy ho an'ny fihenan'ny mari-pana mba hiantohana ny vokatry ny fihenan'ny mari-pana sy ny tsindry. Advantages Valve dia rafitra angular ary ny torolàlana mikoriana eo anelanelan'ny dia mikoriana ...
Valizy mampihena ny tsindry ho an'ny fitsofana soja mampihena ny fiorenan'ny alohan'ny fanafanana ny rivotra
Detail Type Pressure Reducing Valve Model Y666Y-P55 80Ⅰ, Y666Y-1500LB Diameter DN 100 Ny savily mampihena ny savaivony ho an'ny 600 ka hatramin'ny 1.000MW super-critical (ultra-supercritical) savaranonando mialoha ny hafanana dia miakatra ny setroka mamerina ny hafanana ho toy ny loharanon-drivotra mitsoka ny rivotra. Ny tsindry dia ahena amin'ny valin'ny fanaraha-maso ho an'ny toerana mampihena ny fitsofana ny soot ary omena azy ireo ho toy ny loharanom-rivotra. Tombony Ny vatan'ny valizy dia mandray kofehy vita amin'ny vy ...
Valizy mampihena ny tsindry ho an'ny tobin'ny fihenan'ny soot
Detail Type Pressure Reducing Valve Model Y669Y-P58280V, Y669Y-3000SPL Diameter Nomery DN 80 Ampiasaina ho an'ny rafitra fitsofana sootà 600 ka hatramin'ny 1000MW «boite super-mahery» (ultra-supercritical). Tombontsoa Ny vatan'ny valizy dia mandray rafitra vy miendrika angular manana tanjaka avo sy tari-dàlana antonony dia karazana fanokafana mba hihaona amin'ny fepetra takiana amin'ny mari-pana sy ny tsindry. Izy io dia manana welding vy amin'ny fantsona. Ny valizy s ...
Valin'ny tsiranoka mifehy rano ho an'ny bypass amin'ny alàlan'ny tsindry avo
Detail Type Regulate Valve Model T761Y-2500LB, T761Y-420 Nominal Diameter DN 100-150 Izy io dia mifehy ny mari-pana mampihena ny rano mikoriana ny mari-pana sy ny tsindry mampihena valves ho an'ny tsindry avo bypass ny etona turbine. Miaraka amin'ny toetry ny fiasan'ny tsindry ambony sy ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry lehibe, dia mandray maodely throttle marobe izy mba hisorohana ny fisehoan'ny savitation sy ny evaporation flash. Advantages Valve dia rafitra angular ary ny torolàlana mikoriana antonony dia ...
Valizy mifehy ny bypass famatsian-drano lehibe
Detail Type Regulate Valve Model T668Y-4500LB, T668Y-500, T668Y-630 Nominal Diameter DN 300-400 Izy io dia ampiasaina amin'ny fantsom-pivoarana famatsian-drano lehibe an'ny vovon-tsivana mirefy 1 000MW supercritical (ultra-supercritical) hifehezana ny fikorianan'ny rano. Tombontsoa: ny valizy dia rafitra mahitsy, ny làlan-kizorana midadasika dia karazana mikoriana ary ny famehezana ny seza valizy dia lavitra ny faritry ny etona farany manaparitaka fiantohana hanomezana antoka ny ain'ny serivisy. Ny vatan'ny valizy ...
Valizy fanaraha-maso tampoka maika ho an'ny heater avo
Detail Type Gate Valve Model Z964Y Pressure PN20-50MPa 1500LB-2500LB Nominal Diameter DN 300-500 Izy io dia ampiasaina ho fitaovana fanokafana sy famaranana ho an'ny rafitra paompy na rafitra paompy faneriterena avo lenta sy antonony an'ny 600 ka hatramin'ny 1000MW supercritical (ultra-supercritical) unit turbine etona. Tombontsoa Ny vatan'ny valizy sy ny bonnet dia mitazona firafitry ny fifandraisana misy flange eo afovoany, misy fanamorana mety. Ny roa tonta dia mandray fifandraisana mihombo. Ny valizy valizy ...
Detail Type Regulate Valve Model T964Y-420Ⅰ, T964Y-500Ⅰ, T964Y-2500LB Nominal Diameter DN 250-300 Ampiasaina amin'ny fifehezana ny haavon'ny rano amin'ny fantson-drano 600 ka hatramin'ny 1000MW supercritical (ultra-supercritical) ary hahatratra ny tanjon'ny mifehy haavon'ny rano amin'ny fitoeran-drano amin'ny alàlan'ny vava lalana samy hafa. Tombontsoa Ny vatan'ny valizy dia mandray rafitra voadio amin'ny alàlan'ny tanjaka avo lenta ary ny valizy dia mandray rafitra plunger miaraka amin'ny fikorianany milamina ...
Detail Type Drain Valve Model PJ661Y-500 (I) V, PJ661Y-630 V, PJ661Y-P54290 (I) V, PJ661Y-P61310 V Nomery Diameter DN 40-100 Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny rafitry ny rano-etona turbine etona etona ny tariby mafana supercritical (ultra-supercritical). Tombontsoa Ny vatan'ny valizy dia mandray rafitra voadio amin'ny ankapobeny. Ny karazana famehezana ny vatan'ny valizy sy ny bonnet dia mitazona firafitry ny famehezana tena. Ny famehezana ny seza valizy dia misy alim-by Stadium 6 ...
Valizy telo-Hydraulika ho an'ny famatsian-drano ny heater avo tosidra
Detail Type Valve telo-lalana Valve Model F763Y-2500LB, F763Y-320, F763Y-420 Nomery Diameter DN 350-650 Nandritra ny fiasa ara-dalàna ny heater avo-pressure 600 hatramin'ny 1.000MW supercritical (ultra-supercritical) herinaratra hafanana, ny làlana lehibe ny valizy telo-lalana amin'ny fidirana heater avo dia misokatra ary mihidy ny bypass. Ny famatsian-drano amin'ny vovo dia miditra amin'ny heater avo lenta avy amin'ny làlambe alohan'ny hidirana ao anaty vata amin'ny alàlan'ny valizy telo lalana amin'ny avo ...